Siyaabaha loo Kordhiyo Muuqaalada Instagram | RayHaber | raillynews
HomeGUUDSiyaabaha loo Kordhiyo Muuqaalada Instagram
14 / 01 / 2020 GUUD, Warqad Hordhac ah, TURKEY
siyaabo lagu kordhiyo aragtida instagram
Instagram, oo ah mid ka mid ah baraha bulshada ugu weyn adduunka, ayaa ah oo keliya madal wadaagis sawir ah, laakiin sidoo kale waxay u oggolaaneysaa wadaagista fiidiyowga iyada oo lagu daro cusbooneysiinno kala duwan waqti ka dib. Iyada oo cusboonaysiinta ugu dambeysay ee Instagram ay ka dhigtay codsigan wax badan oo shaqeynaya.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ee cusbooneysiintaan ayaa ah in la keeno ikhtiyaarro fiidiyaha fiidiyow ah oo loogu talagalay dalabka Instagram, labadaba marka loo eego codsiyada isticmaale ee Instagram iyo hadda oo leh cusbooneysiin dheeri ah oo loogu talagalay arjigan. Daawashada fiidiyowga ee 'Instagram' ayaa safka hore kaga jirta ka dib markii cusboonaysiinta si dhakhso leh loogu dhawaaqay ka dib markii la kordhiyay ahmiyada la siiyay wadaagista fiidiyowga ee barnaamijka Facebook.
Tani waxay ahayd mid ka mid cusboonaysiinta cusub ee ay soo bandhigtay Instagram. Hadda, iyadoo la cusboonaysiinayo, waa inaan u sheegnaa dadka isticmaala Instagram intee le'eg ee muuqaalkooda la daawaday iyo inta ay jecel yihiin, iyo in Instagram uu ku tartamayo codsiyada fiidiyowga ee muuqaallada iyo tirinta ah. Laakiin hadda xitaa isticmaaleyaasha ka shaqeeya in la kordhiyo tirada aragtida fiidiyowga ayaa la kulma.
Muuqaal Video Video ah
Kuwa aan ka cusboonaysiin mowduucan waxaa laga yaabaa inaysan ka warqabin. Marka hore Waqtiyada fiidiyowga ee 'Instagram' wuxuu ka kordhay 15 sekan illaa 60 sekan. Kordhinta casriyeynta wadaagga fiidiyowga illaa 60 ilbidhiqsiyo ayaa bilawday inay u oggolaato dadka isticmaala Instagram inay ku lug yeeshaan qabashada fiidiyowga. Instagram ayaa ka warqaba xaaladdan oo ay si joogto ah u bilaabaysaa inay bixiso cusbooneysiin cusub oo loogu talagalay qabsashada fiidiyowga
Sida loo Kordhiyo Muuqaalada Muuqaalka
Aynu kaa caawinno tan sababtoo ah tirada aragtida fiidiyowga ee Instagram ayaa noqotay mid muhiim ah. Sidee loo kordhiyaa aragtida fiidiyaha? Marka hore, waa inaad hagaajisid tayada iyo kala duwanaanshaha fiidiyowyadaada. Maalmahan kamarado iyo kaamirooyin ayaa loo soo saaray gaar ahaan warbaahinta bulshada. Adeegsiga iyaga ayaa kaa caawin doona inaad hagaajiso tayada fiidiyowga. Meel muhiim ah, waxaa aad muhiim u ah in la dejiyo wakhtiyada fiidiyoowga sifiican. Xitaa haddii fiidiyaha loo oggol yahay muddo 60 sekan ah, sidoo kale waad wadaagi kartaa fiidyowyada wax ka yar waqtigan.
Jadwalka waqtiga sifiican ayaa kuu soo jiidan doonta dadka dareenkooda waana mid aad muhiim ugu ah danaha. Marka laga soo tago tan, waxaa aad muhiim u ah in la saxo oo la saxo fiidiyaha qaab qaab xirfad leh si kor loogu qaado tayada fiidiyowga. Isticmaalayaasha Instagram waxay wadaagaan fiidiyooga ay jecel yihiin waxayna saameyn toos ah ku yeeshaan kororka tirada aragtiyaha. Isticmaalayaasha qaarkood waxay sidoo kale ku bixiyaan dadaal yar oo waxay iibsadaan daawadayaasha been abuurka ah si ay u kordhiyaan tirada aragtiyaha fiidiyoowga qaab gaaban. Tani waxay u oggolaaneysaa tirooyinka sare ee fiidiyaha in lagu daawado dadaal yar. Iibsiga dhagaystayaasha barta Instagram ayaa noqotay mid aad u caan noqotay maalmahan.
Siyaabaha loo kordhiyo is-dhexgalkaaga Instagram
Qalabkan ayaa mararka qaar loo beddelaa faylal-xareyn xad dhaaf ah, mararka qaarna waxay noqotaa madal ay summaddu u isticmaasho kaliya dhiirrigelinta wax soo saarka, adeegsiga firfircoon ee adeegsadayaasha isticmaala Instagram iyo shirkadaha sumadda leh iyo shirkadaha ururrada kala duwan.
Si aad u hesho dhagaysi ballaadhan, waxaad u baahan tahay inaad kordhiso is-dhexgalka. Waxyaabaha loo sameeyo tan;
Sawirada wejiga leh waxay keenaan 38% ka badan oo jecel iyo 32% faalooyin dheeraad ah.
Sawirada ay kujiraan dadka dhabta ah ee adeegsanaya shey kasta waxay bixiyaan 30% isdhexgal dheeraad ah (magacyada).
Sawirada culeyska culeyska ayaa 24% ka badan isdhaafsiga sawirrada midabka madow.
Sawiro leh meelo badan oo asal ah ayaa bixiya is-dhexgal ka badan 29% marka loo eego kuwa ka sii yar.
Codsigan sidoo kale wuxuu bixiyaa is-dhexgalka ugu badan Axadda iyo ugu yaraan Arbacada.
5 iyo wax ka yar xiiraashka waxay bixiyaan wada shaqeyn dheeri ah 2% sawirrada la isticmaalay. (6 xashiish iyo inbadan oo yareynaysa is dhexgalka).
Sawirada ayaa bixiya 26% isdhexgal ka badan kan fiidiyaha.
Codsigan, saameynta ugu badan ee Mayfair ee la adeegsado waxay ku bixisaa 2% is-dhexgal ka badan kan ugu yar ee loo isticmaalo saameynta Toaster
Sawirada buluuga ah ayaa leh isdhaafsiga 24% ka badan sawirrada gaduudan.
Arrinta ugu muhiimsan "Isku dhex" (jecel, faallooyin, wadaagid iwm.) Codsigani waa xaalada ugu muhiimsan. IISiyaabaha loo kordhiyo is-dhexgalkaaga Instagram sida aan kor ku soo sheegnay.
Qalabka warbaahinta bulshada ee sida xawliga ugu dheereeya
Marka loo eego sahan laga sameeyay baraha warbaahinta bulshada ee adduunka, Instagram waxaa loo doortay inuu noqdo midka ugu badan ee loo adeegsado warbaahinta bulshada. Qalabka warbaahinta bulshada ee sida xawliga ugu dheereeya Waxaa jira in kabadan 200 milyan oo isticmaale. Waa 15 jeer in ka badan codsi Facebook-ga waana 40 jeer in ka badan codsiyada Twitter-ka.
Xiriirka Instagram ee shabakadaha kale ee bulshada
Sida ku xusan wadaagista waxyaabaha ka kooban sawir oo kaliya la wadaagaya waxa ku jira qoraalka; ee LinkedIn% 98 waxay leedahay is dhexgal badan Google % 94 is-dhexgalka badan, halka Facebook % 73 waxay leeyihiin is dhexgal badan, iyo Twitter % 35 helayaa retweets dheeraad ah. Waa sawir warbaahinta bulshada loogu talagalay oo leh tirakoobyo Xiriirka Instagram ee shabakadaha kale ee bulshada sidoo kale waxay muujineysaa qaab dhismeedka keeni kara guul.
Waxaa jira dad aad u yar oo aan adeegsan qalabkan warbaahinta bulshada, oo ah kuwa ugu firfircoon adduunka. Haddii aan si sax ah u isticmaalno Instagram, waxaan u soo jiidan doonaa dareen.
Waa kuwan talooyin dhawr ah;
Adeegsiga Hashtag:Waa inaadan ilaawin in hashayaasha ay sidoo kale yihiin kuwo dhexdhexaad ah (waa inaad haysataa ugu badnaan 5 hashtags), laakiin xusuusnow in xashiishooyinka ay wax ku ool yihiin raadinta.
Wadaagista waxyaabaha caadiga ah: Waxaad u baahan tahay inaad siiso raacitaannada joogtada ah kuwa raacsan waqti cayiman. (100 kamid ah 57-ka nooc ee caanka ah ee ugu caansan waxeey wadaagaan ugu yaraan 1 wadaag asbuucii, halka 28 ay wadaagaan ugu yaraan 5 wadaag asbuucii.)
Waqtiga saxda ah: Waa inaad tustaa kuwa raacsan waqtigaaga saxda ah iyo saamiyada saxda ah. Tusaale: waa inaad la wadaagtaa wakhtigaaga, xilligaaga, fasaxaaga, munaasabaddaada iwm.
Contest: Mudaharaadyada lagu soo abaabulay barta Instagram ayaa ah hab aad wax ku ool u ah oo lagu ballaariyo dhagaystayaashaada Instagram oo loo kordhiyo isdhaafsiga boostadaada.
gaadiidka: La wadaag cinwaanka cinwaankaaga akoonkaaga Instagram-ka aaladaha kale ee warbaahinta bulshada (ama meelaha gaarka ah), si aad u kordhiso taraafikadaaga.
Marka loo eego macluumaadka kor lagu soo sheegay, ma aha wax adag in la haysto tiro badan. this Soojeedinta Instagram Waxaan rajeynayaa inaad ku anfacday.
Shirkadda hogaamisa Crover ah wuxuu kaa caawinayaa, adeegsadeyaashayada qiimaha badan, adigoo siinaya adeeg lagu kalsoonaan karo aagag badan, waxaad ka heli kartaa adeegga ugu tayada wanaagsan ee arrintan la xiriira.
Dagaalka Ilgaz Xiliga Qaboobaha
Yasar Rota ayaa qoray qoraallada cusub ee dayuuradaha iyo gaadiidka
Qeybta ugu badan ee maalgashiga ee 2015
Qaybta ugu sarraysa ee 2015
Sida loo Kordhiyo Muuqaalada Video-ga ee Instagram
Muuqaalka fiidiyowga ee 'Instagram'
Sida loo Kordhiyo Muuqaalka Muuqaalka